पानीले जोगाएको सम्बन्ध – कामना डेली
कला र साहित्यमुख्य समाचार
पानीले जोगाएको सम्बन्ध
On २०७७ आश्विन १०, शनिबार ११:१७ Last updated Sep 26, 2020
मन्जु र सनिशको जोडी मिलेकै देखिनथ्यो । दुबै खुुुशी नै देेेखिन्थे । यद्दपी श्रीमान,श्रीमती हुन कि होइनन जस्तो पनि बेला बेलामा लाग्थ्यो । कारण युवायुवतीको जस्तो चकलेटी माया थिएन, दुबै रिजर्ब भएजस्तो लागथ्यो ।
उमेरमा अधबैंसे भएपनी भावनात्मक कम तर प्लाटोनिक माया नै बढी देखिन्थ्यो ।अर्थात् नजिक हुँदा एक अर्कालाइ बेवास्ता गरेजस्तो आबश्यक पर्दा मात्रै बोल्ने वा आफ्नो काम गर्दा दुबै स्वतन्त्र भएजस्तो लाग्ने ।आक्कल झुक्कल बाहेक संगसंगै बाहिर पनि कमै हिड्ने । छरछिमेक भन्दा बाहिर यि दुइ जना हुन भन्ने पनि कमैलाइ थाहा हुने । अहिलेको परिवेशमा हेर्दा परम्परागत माया जस्तोो लाग्ने। नजिक हुँदा मतलव नगरे जस्तो तर एकैछिन टाढा भए वा नदेखे छट्पटीने वा एकाअर्काको अभाव महशुस गरिहाल्ने । छुट्टीएर बस्नै नसक्ने वा अब्यक्त प्रेम बोकेका जोडि जस्तो देखिने । बाहिरी रुपमा यो खाले सम्बन्धमा दुबै एकदमै खुशी भएजस्तो लाग्ने । बिहे सम्बन्ध गांसिएर आठ बर्ष भन्दा बढी समय संगसगै ब्यथित गरिसकेका । जिवन संबन्धलाइ लिएर खासै दुबैले गुनासो नगरेका । दुबैैैैको राजिखुशिमा दुइ सन्तान पनि भएका । खान लाउन वा अन्य चाहना पुरा नभएकोलाइ लिएर असन्तुष्टि पनि नसुनिएको । स सानो मनमुटाब भएपनी स्वाभाविक रुपमा लिएको जस्तो देखिन्थ्यो । एकदिन मन्जुले आफु डक्टरकोमा गएको र आफुलाइ डिप्रेसन भएको सुनाइन । सनिसले उनको कुरा पत्याएन र मनमा डर भएपनी मन्जुलाइ ढाडस दिने हेतुले डाक्टर प्रती अबिश्वास गर्दै डिप्रेसन हुनुको लक्षण केहि छैन भन्यो ।खै सनिसले आफुलाइ केयर गरेन भन्ने लाग्यो कि मन्जुले संगै नबस्ने उदघोष गर्दै आफु संबन्धबाट कति खुशी नभएको जनाइन ।सनिसले आफु पनि खुशी नभएको प्रतिउत्तर दियो ।त्यसपछि दुबै बीच रिसा रिसमा एक अर्कालाइ नराम्रो देखाउन एकपछी अर्को कमजोरी खोजिन थालियो । लवाइ खुवाइ,बोलाइ सबैमा भएका शंका आशंका पोखिन थाले ।त्यसैबिच आफन्तले पनि यस्तो दमन,शोषण सहेर बस्न नहुने बताए । खुट्टा भए जुत्ता पाइने,एक्लै पनि बाचिने दलिल दिन थाले । सम्पत्तिको लेखाजोखा गर्न थाले,छोराछोरी आफु आफुले राख्ने दावी गर्न थाले ।आफन्त अझै दुइ पाइला अघि सरेर अब संगै बस्न नहुने सम्बन्ध बिच्छेद गरि हाल्नुपर्ने भन्दै उक्साउनु सम्म उक्साए। यस्तो बाताबरण भयो कि मन्जु र सनिसले एक अर्कैको मुखै पनि हेर्न नसक्ने स्थिती बन्यो । आठ बर्ष संगै घामपानी झेल्दा पनि मानौ राम्रो भन्ने स्मरणीय क्षण दुबैजना संग केहि नै थिएन जस्तो देखियो।छोराछोरीको मुख हेरेर भएपनी मिल्नुपर्छ भन्दा पनि दुबै जना मिल्न समेत तयार भएन्न । यसरी संगै नबस्ने निर्णय सहित आइतबार दुबै अदालत गएर डिभोर्सको निबेदन दिन फाइल गरे । संयोग अदालतमा निबेदन दर्ता गरि बाहिर गेटमा आउँदा ठुलो पानी पर्यो ।ओत लाग्न केवल छेउमा रहेको एउटा सानो चिया पसल थियो । दुबै जना आफन्त सहित त्यही चिया पसलमा छिरे ।संयोग बस्ने क्रममा दुबैजना एउटै टेवलमा आम्नेसाने भएर बस्न पुगे । दुबैले होटलमा चिया नास्ता अर्डर गरे । बाहिर झनै ठुलो पानी परिरहेको थियो,निस्किएर अन्त जाने स्थिती थिएन । आकाश पनि बिजुली निकाल्दै गर्जिरहेको थियो । सनिसलाइ थाहा थियो मन्जुलाइ आकास गर्जिदा डर लाग्छ । किनकी बिहे गरेको चार बर्ष लाग्दै गरेको बेलामा माघ तिर ठुलो आबाज गरि घर भन्दा पर रहेको ठुलो रुखमा चट्याङ्ग परेको देखेर डराउदा सनिशको अंगालोमा बेरिएकी थिइन मन्जु। तसर्थ प्रत्येक चट्याङको आवाजमा उनि सधै त्यही दिनको स्मरण गर्थिन । सनिसले आंखा उठाएर मन्जु तिर हेर्यो,मन्जुले पहिले देखी हेरिरहेकी थिइन । दुबैको आंखा आंसुले भरिएको देखियो ।सनिसलाइ दया लागेछ उसले कांपेको स्वरमा सोध्यो – तिमिलाइ डर लाग्यो? मन्जु । त्यो सुन्ने बित्तिकै मन्जुको आंसु थामिएन। तर उनि बोल्न सकिन्न,हेरिरहिन । कुन्नी के सोचिन,एक्कासी केहि बेरपछी सोधिन- तिमिले बिपिको औषधि त खाएका छौ नि ? सनिस । नबिर्सिनु है । तिमि अलि बेवास्ता गर्छौ नि । खोइ यो सोधाइ अन्यासै उनको मुखबाट फुत्किएर बाहिर आयो । टिनमा जोड जोडले पानी परेकोले त्यो आवाज अरुको कानसम्म नपुगेपनी सनिसको कानमा प्रष्ट ठोकियो ।सनिस पनि भावुक भयो । एक हप्तादेखिको रिसराग मत्थर कानमा प्रष्ट ठोकियो ।सनिस पनि भावुक भयो । एक हप्तादेखिको रिसराग मत्थर हुदै गएको स्थिती देखियो ।
सनिसले भन्यो – आखिर हामी एक अर्कालाइ अझै माया गर्दै त रहेछौ । यस्ता पल त धेरै होलान नि ? मन्जु । यि याद लिएर एक्लै बांचेको के अर्थ बरु कमजोरी सुधार गरौ न । छोराछोरीको आंखामा हेर,ति अबोध हेराइले सोधिरहेका छन- हाम्रा आमाबुवा कति स्वार्थी बनेका हगि ? आफ्नो इगोको लागी हाम्रो खुशी खोस्न खोज्दैछन ।बरु दुबैको माया यिनै माथी बाडौन ,हुन्न ? मन्जु नबोलिकन सम्बन्ध बिच्छेदको कागज निकालिन र च्यातिन अनि भनिन – हामी नछुट्टिने भयौ । यो सुनेर आफन्तहरु मुखामुख गर्न थाले । मन्जु र सनिस केटाकेटीलाइ डोर्याउदै चिया,नास्ताको पैसा तिरेर मुस्कुराउदै अदालतको बाटो तिर लागे । अकस्मात परेको पानी र चट्याङप्रती आभारि बनेको प्रष्टै देखिन्थ्यो । उनिहरुको अनुहार भन्दै थियो-मान्छेले होइन प्रकृतिले चाहनुपर्दो रहेछ, असम्भव केहि रहेन्छ ।मान्छे त केवल समयको खेलौना मात्रै हो ।
पुश्कल शर्माको ‘सम्झना आउला एकदिन’ ( भिडियो)
कपिलबस्तुमा एक वडाध्यक्षको निधन